Health Archives - Khit Style
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက်..သင်ဘယ်နှစ်ချက် ကျူးလွန်ပြီးပြီလဲ…ပြန်ပြင်လိုက်တော့
Posted on June 19, 2021 July 1, 2021 by khitstyle
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက် ပရိသတ်တွေ ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေး တစ်ခု ဖော်ပြပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်း စေတဲ့ အချက်လေးတွေ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ရှောင်ရှား လိုက်နာမယ် ဆိုရင် နုပျိုပြီး အရွယ်တင်စေ မှာဖြစ်လို့ လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းချင် ပါတယ်။ (၁) အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်း အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်းက…
ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသူ၊ ပိုးတွေ့လူနာနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိပဲ ဟိုတယ်မန္တလေးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ အတည်ပြုလူနာ ဝန်ထမ်း ၂၃ ဦးထိရှိနေပြီ
မန္တလေးခရိုင်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၇၈လမ်း၊ ၃၇လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြားရှိ ဟိုတယ်မန္တလေးတွင် ဝန်ထမ်း ၂၃ ဦးထိ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ အတည်ပြုလူနာဖြစ်လာသဖြင့် ဟိုတယ်ကို Lock Down ပြုလုပ်ထားကြောင်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ကိုဗစ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။ အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြားအရွယ် အမျိုးသမီး ၁၇ ဦးနှင့် အသက် ၄၀…
ခြေထောက်က အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး
ပျိုမေအမာရွတ်တွေဟာ တကယ်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အမာရွတ်တွေရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်းလျော့နည်းသလို စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး ရှက်ရွံ့သလိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင် E အဆီ ဗီတာမင် E ဆေးတောင့်လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီလေးကို ဖောက်ထုတ်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အဆီလေးကို အမာရွတ်တွေကို လိမ်းပေးကာ နှိပ်နယ်ပေးကာ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေနွေးလေးနဲ့…
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးများကာကွယ်ဖို့ ၁၅မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးကြည့်လိုက်ပါ
အသကျရူလမျး ကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါပိုးမြားကို၁၅မိနဈနဈအတှငျး ခကြျခငြျးသကျသာပွီး ပိုးကအဆုတျထဲအထိ ရောကျသောအဆင့ျရငျဘတျအောင့ျသောအဆင့ျ ထကျကြောျပွီး အသကျရူလိုကျရငျဆနျပွုတျအိုးပှကျသလိုအသံထှကျနရေငျတောငျ၃ရကျနှ င့ျပြောကျပါသညျ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပါ အရမျးလှယျပွီး ၁၅မီးနဈအတှငျးကိုယျတိုငျသကျသာသှားသညျကို လကျတှေ့သိရှိနိုငျပါသညျ။ ဆေးနညျး ၁။အခငြျး၂လကျမခန့ျရှိ ကွကျသှနျနီဥကွီးတလုံးကိုအခှနျခှာ အလုံးလိုကျရဆေေးပွီး ခပျကွီးကွီးကိုကျပွီးဝါးလိုကျပါ ခကြျခွငျးမြိုမခလြိုကျပါနဲ့ ပါးစပျပိတျဝါးနစေဉျမကြျရညျကလြောကျအောငျထှကျလာသောအခိုးကို ပါးစပျမှအဆုတျထဲကို အဆုတျပွည့ျအောငျစုတျသှငျးလိုကျပွီး၂စက်ကန့ျ၃ စက်ကန့ျခန့ျအသကျရူအောင့ျထားပါ။ ပွီးရငျပါးစပျပိတျလြှကျ ဖွေးညှငျးစှာ နှာခေါငျးမှပွနျထုတျပါ။ပါးစပျထဲတှငျကနြျနသေောကွကျသှနျနီဖတျမြားကိုဆကျဝါးပွီးထှကျလာသော အခိုးမြားကိုယခငျအတိုငျဆကျလုပျပါ။ အခိုးနညျးသှားရငျ အဖတျရောအရညျရောကို လညျခြောငျးအတှငျးဖွေးညှငျးစှာမြိုခလြိုကျပါ။အထကျပါနညျးအတိုငျးတဈလုံးလုံးကုနျသညျအထိ ဝါးပွီးအခိုးကိုစုတျသှငျးနှာခေါငျးကမှုတျထုတျလုပျပါ။ ကုနျသှားရငျ…
ဒီလိုတွေ စဖြစ်တာ သိတာနဲ့ ချက်ခြင်း သံံပုရာရည်ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ သောက်လိုက်ပါ
Posted on August 25, 2020 by khitstyle
ဆေးရုံံမှာ ကုသမှုခံယူရင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့် လူနာများ၏ ပြောပြချက်… နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 1. ဗီတာမင်စီ – 1000 သောက်ရတယ် 2. ဗီတာမင် အီး သောက်ရတယ် 3. နံနက် 10:00 – 11:00 အချိန်အတောအတွင်း ၁၅ – ၂၀ မိနစ်ကြာ နေပူစာ လှုံပေးရတယ်။ 4. ကြက်ဥ ၁လုံး စားပေးရတယ်။ 5….
မုန့်ဟင်းခါးမှာပါတဲ့မုန့်ဖတ်မချဉ်အောင်မပုတ်မသိုး အောင်သုံးတဲ့ဓါတုဆေးဝါးတွေ ကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိလို့ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရ
အရက်မသောက် ဆေးလိပ်မသောက် ကွမ်းမစားသူတစ်ယောက်ကကျောက်ကပ်ထိလို့ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတယ်ဆိုတော့ ဇစ်မြစ်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဖြေကတော့ဒီလူဟာ မုန့်ဟင်းခါးအလွန်ကြိုက်လို့နေ့တိုင်းစားသူပါတဲ့မုန့်ဟင်းခါးမှာပါတဲ့မုန့်ဖတ်မချဉ်အောင်မပုတ်မသိုး အောင်သုံးတဲ့ဓါတုဆေးဝါးတွေကြောင့်ပါတဲ့ မုန့်ဖတ်လုပ်တဲ့ဖို အားလုံးနီးပါးကလည်း မုန့်ဖတ်တွေမပုတ်အောင်အတွက် လူသေတွေမပုတ်အောင်သုံးတဲ့ဖေါ်မလင်တွေ သုံးကြတယ်ဆိုတာကိုယ်တွေလည်း ကြားဖူးတာတော့ကြာပါပြီ မုန့်ဖတ်ဖိုတွေရဲ့လက်သုံးစကားကလူတကာကသုံးနေကြလို့သူတို့လည်းမသုံးမဖြစ်သုံးလိုက်ရတာပါတဲ့ ဒီကြားထဲသစ်သီးသည်တွေက မှည့်ဆေးတွေသုံးပုဇွန်ခြောက်ငခြောက်ကဓါတုဆေးတွေဖြန်းအစာအတုဆေးအတုရေသန့်အတု နဲ့ဆိုးဆေးတွေဓါတုဆေးတွေကြားမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြရတဲ့ဘဝတွေထဲက ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်တော့ရောက်ပါ့မလဲတွေးရင်း 🙄🙄 @ Mg via ချန်ပီယံ @
ဒူးနာ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်းများကို တောင်းဆိုလာသူများအတွက် ဒူးနာ ပျောက် ဆေးနည်းများကို စုစည်း၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။
းနာ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်းများကို တောင်းဆိုလာသူများအတွက် ဒူးနာ ပျောက် ဆေးနည်းများကို စုစည်း၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ ( ၁ ) လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါများအတွက် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးအမှည့်ကိုဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍ သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့် လုံအောင်လိပ်ကာ ( ၅ ) နာရီခန့် ပြုတ်၍တစ်နေ့သုံးလုံးစီ ( ၅ ) ရက်ဆက်တိုက်စားပေးပါက လေဖြတ်…
ရေနွေးသောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကျန်းမာနေဖို့ အတွက်ရေကိုအလုံအလောက်သောက်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်ရေကို သောက်သည်ဖြစ်စေ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့သူ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ရေနွေးကို ပိုပြီးသောက်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရေနွေးသောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးရုံသာမကပဲ အစာခြေစနစ်၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတို့ကို အထောက်အကူပြုတာနဲ့ လူကို လန်းဆန်းစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ရေနွေးသောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အစာခြေဖျက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတယ်…
C လေးတစ်လုံး လွဲတာနဲ့ လူ့အသက် သေစေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးမှားယွင်းမှု (သတိပြုစရာ)
C လေးတစ်လုံး လွဲတာနဲ့ လူ့အသက် သေစေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးမှားယွင်းမှု (သတိပြုစရာ) လူ့အသက် သေစေနိုင်လောက်သော ဆေးဝါးမှားယွင်းမှု့များအား အများသတိထားမိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ဒီညနေ… ရွာဘက်က လူနာတစ်ယောက်က ဆေးကဒ်တွေလာပြပြီး.… မနေ့က ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး အထူးကု ဆေးခန်းမှာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ပြသပါတယ်။ဒူးနာနေလို့ပါတဲ့အခုဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေး ၂ ခွက်သောက်ပြီး ရင်တွေတအား တုန်လာလို့ လာပြတာပါတဲ့။ကြည့်လိုက်တော့ Meftal-Spas /Ranatid/Musol ၃ မျိူးလွဲနေပြီလို့စိတ်ထဲက…